Ukuzisa uSuku lwase-Australia ebomini ukude | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » Ukuzisa uSuku lwase-Australia ebomini kude
Ukuzisa uSuku lwase-Australia ebomini kude
Ukuveliswa kweengcali ze-automation zasebenza kunye neTalbot Productions kunye neZisombululo zoSasazo ukwenza i-gala yangokuhlwa yangokuhlwa yokubhiyozela i-UK yoSuku lwe-Australia ngo-2021. Umsitho, usasazwe ngqo kwiindwendwe ezimenyiweyo, kubandakanya umculo, imiyalezo ekhethekileyo evela kubantu abadumileyo baseAustralia abahlala e-UK kunye kwanokungcamla iwayini.
I-Australia Day Foundation, ephakamisa imali yokubonelela ngoncedo lwezezimali kubantu base-Australia ukuqhubela phambili imfundo yabo e-UK, ibamba umnyhadala wonyaka, nge-Australia Day (nge-23 kaJanuwari), e-Australia House eLondon. Ukuvalwa kweendibano ngenxa ye-covid-19 kugwebe oku ngo-2021, kodwa abaququzeleli babezimisele ukwenza umoya ofanayo phantse.
Ngelixa umamkeli zindwendwe, umhlekisi u-Bec Hill, kunye nomlingisi weqonga lomculo uDaniel Koek kunye neqela lase-Australia House, ukugcina ukudideka ekuhlaleni bekukho abasebenzi abambalwa kwindawo, kunye netekhnoloji ye-nxtedition ebonelela ngemveliso ekude. Iziphumo ze-1080p zeekhamera ezintathu, kunye nevidiyo edityanisiweyo edityanisiweyo, zafakwa kusetyenziswa i-Dream Clip Barracuda encoders kumjelo we-SRT kwaye yathunyelwa kwi-intanethi yoluntu kwiziko ledatha le-nxtedition, i-1000km kude eMalmö, eSweden.
U-Adam Leah, u-Adam Leah, osebenza kwistudiyo sakhe sasekhaya eMarieholmm, umgama ongaphezulu kwe-30km, wayitshintsha le nkqubo bukhoma esebenzisa i-nxteditions automation kunye nebhokisi yeefoto ukulawula i-router, iiseva zevidiyo, iiseva zemizobo, umxube wombono kunye nedesika yeaudiyo kwiziko ledatha laseMalmö. Uye wadlala nakwizinto ezirekhodwe ngokuhlwa ukudala umcimbi opheleleyo. Kananjalo nokusiwa kubanini beetikiti, inkqubo ye-nxtedition nayo yathumela ukuhanjiswa kwevidiyo okuphindayo kwimveliso ebuyela eLondon, kwakhona njenge-SRT kwi-intanethi, kunye neskripthi somyalezo kunye nonxibelelwano lweTrilogy.
"Umxhasi wayefuna amaxabiso aphezulu emveliso njengoko siqhele ukuhambisa ebomini," utshilo uCharlie Talbot weTalbot Productions. Ndakhe ndasebenza ne-nxtedition ngaphambili, kwaye bendisazi ukuba zinamandla angakanani amandla emveliso yabo ekude. Wonke umntu wayechukumiseke ngokwenene yindlela esoyise ngayo imiceli mngeni yokudala isidlo sangokuhlwa esisebenzayo kunye nokuntywila. Kwanaxa sinako ukunciphisa izithintelo ebantwini, imveliso ekude iya kuba yindlela yokuya kwiminyhadala enje, ukunciphisa abasebenzi esibafuna ngaphandle kwesoyikiso lomgangatho okanye amandla.
Kwisifundo sasemva kwexesha, u-Adam Leah uthe "Senze umcimbi wonke wangokuhlwa, sinabantu abathandathu kwisiza: iikhamera ezintathu, izixhobo zokukhanyisa ezimbini kunye nomxube wokumamela. Ngenxa yendlela eyilelwe ngayo i-nxtedition, ndinokuthi ndibeke iliso kwaye nditshintshe umboniso osekwe kwiskripthi, kunye nokurekhodwa kwangaphambili okufaka njengoko sifikile kwindawo efanelekileyo kumdlalo. Nokuba ibisisiganeko esinde kwaye ibindim ndedwa umntu ophetheyo kwimveliso ibingaxinzeleleki. Lo ngomnye umboniso onomdla wokubanakho kwemveliso ekude ukuzisa imigangatho ephezulu kakhulu kuluhlu lonke lweziganeko. ”
I-Cinegy iyanda ngakumbi kunye ne-Akratek yokujoyina i-Cinegy AŞ Amaqabane oShishino - Februwari 23, 2021
Ukuzisa uSuku lwase-Australia ebomini kude - Februwari 18, 2021
diguise ixhasa i-StarTracker yeXR - Februwari 18, 2021
esizisebenzelayo soSasazo iziganeko Live Live umculo Mveliso umveliso ode izisombululo isixokelelwano 2021-02-18
Previous: diguise ixhasa i-StarTracker yeXR
next: I-PTZOptics ikhupha uMlawuli we Joystick omtsha